Akwụkwọ, Business Weebụ Web Design & SEO - Business Directory
Health & Ntụrụndụ
Zụ ahịa & Ọrụ
Ndepụta anyị na-enye gị ọtụtụ azụmaahịa ị nwere ike ịchọ enyemaka nke. Anyị na-enyekwa ọrụ weebụ: Nke a gụnyere ọrụ imepụta weebụsaịtị, na ọrụ njikarịcha peeji, ọrụ SEO, mmemme ngwanrọ omenala, wdg. Nwere ike ịnweta ndị ọkachamara maka ndụmọdụ iji mepụta akaụntụ ndị ọrụ, na-agba ọsọ mgbasa ozi Social Media na ihe ọ bụla. Nwere ike iku ọrụ SEO ga - enyere gị aka ịkwado ebe nrụọrụ weebụ gị n’elu isi engines ọchụchọ dị ka Google, Bing, Yahoo na ngwa ọchụchọ ndị ọzọ yiri ya. Ndị ndụmọdụ anyị nwere ike inyere gị aka ịkwado ọtụtụ isiokwu dị mkpa ma nyere ndị mmadụ aka ịchọta weebụsaịtị gị.
Akwụkwọ ndekọ azụmahịa
Akwụkwọ ndekọ aha na azụmaahịa
Search Engines mere ka ọ dịkwuo mfe ịchọ ihe nke ọma, ozugbo ị mere nyocha ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nde nsonaazụ ọchụchọ na isi isi nchọta ọ bụla dịka Google, Yahoo na Bing, wdg. Ọ na-enyere aka ịchọta azụmahịa, ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ndị mmadụ nwere ike ịchọ ịzụta.
Ndepụta anyị na-enye ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ndị nwe weebụsaịtị ohere ịgbakwunye weebụsaịtị ha na ndekọ ndekọ anyị. Mgbe agbakwunyere azụmahịa na ndekọ, ọ na-arụkwa ọrụ dị ka backlinks na weebụsaịtị kachasị ma na-emekwa ka ikike ngalaba ahụ dịkwuo elu. Iji ọrụ SEO ziri ezi na-eme ka o doo anya na ị nwere ike ịrị elu karịa onye na-asọmpi gị na nsonaazụ ọchụchọ engine.
E nwere ọtụtụ SEO ihe na weebụsaịtị ga-agbaso iji hụ na ha nwere ike ịkwalite elu na nyocha ọchụchọ. Ka ọnụọgụ ihe nke weebụsaịtị nwere ike ịkwalite weebụsaịtị ya maka, ka ọ na - enwe ike ịba karịa ndị asọmpi ya. Iji ọrụ SEO, ọ dị mkpa ka ị nwee ezigbo ihe ọmụma banyere ya. Ndepụta anyị na-enye gị ndị ọkachamara SEO nwere ike inyere gị aka na SEO nyocha na ọrụ SEO ga-enyere weebụsaịtị gị aka ịtọ ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ engine. Ma ị na-eme atụmatụ ịmalite weebụsaịtị ma ọ bụ nweeworị weebụsaịtị ma ọ bụrụ na ịchọrọ njikarịcha, ịnye ọkachamara site na ndepụta ndekọ bụ nhọrọ kacha mma.
Kere Web weebụsaịtị
Chọpụta ihe banyere weebụsaịtị Seo
SEO (Search Engines Optimization) Filiks bụ ụzọ iji kpuchie ọtụtụ ihe na karịa saịtị asọmpi.
Desktop, Laptọọpụ & Handheld Devices
Kọmputa na akụrụngwa nke oge a na-emelite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, kọmputa dị na nha dị iche iche, yana sọftụwia na ngwaike dị iche iche, atụmatụ ndị ọzọ, wdg.
Tụle mkpebi nke ngwaọrụ dị iche iche, ọ dị mkpa na weebụsaịtị nwere ike ịkwalite onwe ya iji kwado ngwaọrụ niile ma ọ bụghị otu ụdị. Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke nzuzo nke ebe nrụọrụ weebụ, ebe ọ na - eme ka weebụsaịtị wee dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla, mee ya ngwa ngwa ma zaghachi ma debe nzuzo ahụ.
Ọrụ kọmputa na-agụnye ọrụ ndozi, ndozi, mmelite na mmelite nke ga-ahụ na kọmputa na-arụ ọrụ zuru oke. Akwụkwọ ndekọ anyị na-enye gị ndị ọkachamara nwere ike inyere gị aka idozi ngwọta kọmputa, nsogbu, nkwalite, ndụmọdụ iji mee ka ọsọ ọsọ kọmputa ma mezuo mkpa ndị ọzọ.
More banyere kọmputa
Kọmputa na Desktọpụ & Laptọọpụ
Ngwaọrụ aka & Obere
Ọrụ ndozi kọmputa dị mkpa mgbe ịmalitere ịhụ nsogbu na kọmputa gị n'ihi nsogbu na ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ.
Dingtinye ma ọ bụ ịkwalite draịva siri ike, RAM, kaadị eserese, wdg ma ọ bụ nkwalite ngwanrọ dị ka windo, faịlụ mgbasa ozi, wdg dị mkpa n'ihi na ha na-enyere aka ịnọgide na-arụ ọrụ kọmputa n'ụzọ zuru oke.
Kọmputa bụ ngwaọrụ eletrọnik, ọ dịkwa ka ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, ọ dịkwa mkpa mmezi ya oge niile. Nke a na-ezo aka nhicha akụrụngwa na ngwanrọ iji mee ka ọsọ nke kọmpụta ahụ, kwalite ha mgbe ọ dị mkpa, wdg.
Ndozi Ndozi Kọmputa
Nwere ike ịtụle iwepu nsogbu gị n'onwe gị, mana a na-atụ aro ka ị were ndị ọkachamara nwere ike ịnye gị ozi na ọrụ dị mkpa iji kpochapụ nsogbu ahụ.
Ndepụta Ahịa ma ọ bụ Ọrụ
Akwụkwọ ndekọ anyị na-achịkọta ndepụta nke ndị ọkachamara na ndị ọkachamara nwere ike inye gị azịza maka nsogbu gị, nwere ike inye aka na-azụ ahịa gị nke ọma ma na-enye ndụmọdụ.
Na weebụsaịtị, ihe oyiyi, vidiyo na ọdịnaya bụ ihe ndị na-ahụ na weebụsaịtị. E wezụga nke a, ihe ndị ọzọ ịchọtara na webụsaịtị ka emepụtara site na iji asụsụ nzuzo. Have nwere nhọrọ nke ịchọ CMS nyiwe ma ọ bụ ndị na-ewu weebụsaịtị n'ịntanetị nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta ma ọ bụ mepụta mkpokọta na ịdị mfe. Agbanyeghị, a na-ejikwa usoro ndebiri ndebanye aha ndebiri aha ndị a yana ị nwekwara ike idezi ndebiri dịka mkpa gị. Nchikota nke asusu ndi ozo e jiri mee ihe aghaghi ime ka njehie obula ma obu ibelata oke ibu peeji, o gha aburiri nchegbu.
E nwere ụdị weebụsaịtị abụọ nwere ike ịmepụta
Static Site - Ndị a bụcha otu peeji nke weebụsaịtị yana ọdịnaya ma ọ bụ ọdịnaya edoziri. Ihe ndị dị na weebụsaịtị na-agbanwe naanị mgbe ejiri aka ha dezie.
Dynamic Site - Ndị a bụ weebụsaịtị ndị a na-echekwa na nchekwa data, nke na-emelite na-akpaghị aka mgbe ọdịnaya ma ọ bụ ibe na-agbakwunye na weebụsaịtị. A na-ahụta weebụsaịtị ahụ ka ọ bụrụ na ị na-emekọrịta mmekọrịta onye ọrụ na ndị ọzọ nchọta ihe n ’ihu igwe.
More gbasara weebụsaịtị
HTML5, CSS, PHP, koodu JS
Ntughari nzuzo maka SEO
Peeji nke SEO
Need chọrọ ndụmọdụ?
Mara nke ọma ihe bụ usoro na ohere nwere ike inyere aka ịchekwa ego na oge na nhọrọ ziri ezi.
Njikwa Nchọpụta Nchọgharị
SEO na-ezo aka njikarịcha Ngini Nchọgharị; ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ịhazi ebe nrụọrụ weebụ na engines ọchụchọ. Enwere ọtụtụ usoro enwere ike ịme iji mee ka webụsaịtị SEO bụrụ enyi; nke a na-amalite site na ịzụta ngalaba, ịnweta ihe nkesa na-achọta ịchọta atụmatụ na akụrụngwa ọ na-enye ma mepụta mkpokọta weebụ na koodu nzuzo dị ọcha.
Iji nweta ederede dị ọcha ma dị mma, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma banyere nzuzo ma ọ bụ chọta ọkachamara ọkachamara iji mepụta mkpokọta na-ebu ngwa ngwa nke na-arụ ọrụ nchọta na njirimara na mmekọrịta maka ndị ọrụ. SEO dị mkpa n'ihi na ọ na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa ma na-enye ya ohere inweta nsonaazụ ọchụchọ ka mma.
E nwere ụdị SEO abụọ -
Nke a gụnyere ịmepụta faịlụ, ọdịnaya na mgbasa ozi na weebụsaịtị gị, ọ gụnyere njikarịcha onpage, na-agbakwunye ọdịnaya na mkpado, wdg.
SEO dị na mpụga
Njikọ njikọ, ntinye akwụkwọ ntinye azụ, ntinye akwụkwọ ndekọ aha, na ihe ndị ọzọ bụ akụkụ nke SEO dị na mpụga. Ọ na - enyere weebụsaịtị aka iwulite ikike ma bulie elu na igwe ọchụchọ.
More gbasara SEO
Kachasị Usoro & Dị Mkpa Tags
Ndepụta mpaghara, Ọbịa, Backlinks
Ichoro SEO nyocha?
Ihe omuma doro anya banyere SEO (Search Engines Optimization) na-enyere aka ịmalite site n'ụzọ ziri ezi.
Ntinye Ngini Nchọgharị
Choputa nzipu ozi na ntinye akwukwo
Maka weebụsaịtị ka ọ bụrụ akụkụ nke Web Wide Web ma pụta na nsonaazụ ọchụchọ ọ dị mkpa iji nyefee URL na Njin Injin na Ndepụta Akwụkwọ. A na-ejikwa injin ọchụchọ na ndekọ aha maka ntinye ntinye saịtị. Ntinye akwụkwọ ndekọ na ntinye akwụkwọ nchọta ka a na-ahụta dịka otu n'ime usoro kachasị mma iji wuo ikike ngalaba ma mee ka weebụsaịtị gị ewu ewu.
Dị ka ị mepụtara weebụsaịtị ọhụrụ ọ ga - adị mkpa ịnyefe saịtị gị maka igwe ọchụchọ. E nwere engines ọchụchọ nke chọrọ nnyefe oge niile maka ibe weebụ ọ bụla ị gbakwunye na weebụsaịtị gị, ebe enwere weebụsaịtị ndị ọzọ chọrọ naanị ka ị nyefee URL weebụsaịtị gị ma ha na-abanye na peeji nke iji nyefee ha na akpaghị aka. Ntinye akwụkwọ ndekọ aha na-ezo aka n'enyefe weebụsaịtị gị na ndekọ aha dị iche iche dabere na edemede na ngalaba.
Mgbe ị nwere azụmahịa, ị mepụtara mkpokọta weebụ site na iji asụsụ nzuzo; ị na-etinye njikarịcha akụkụ n'uche ma mezue weebụsaịtị. Ihe ọzọ ị ga-elekwasị anya bụ ịdị elu karịa na nsonaazụ njin ọchụchọ. Njikọ njikọ na ntinye aka na ntinye ntinye bụ usoro SEO dị na mpụga ịchọrọ iji lekwasị anya iji jide n'aka na ị nwere ikike ikike dị elu karịa ọkwa gị.
You nwere ike ịnụ ụtọ elele nke ịdebe weebụsaịtị gị ma ọ bụ azụmaahịa anyị na ndekọ aha anyị na ngalaba dị mkpa na ngalaba edemede, ebe ndị ahịa nwere ike ịchọta weebụsaịtị ma ọ bụ azụmaahịa gị nke ọma.
More Banyere Nnyefe
Choputa Ntanetị & Akwụkwọ ndekọ aha
Ntanetị nri & Ntuziaka Ntuziaka
Ntinye Weebụ Iji Chọọ Njikwa
Chọrọ ka anyị nyefee weebụsaịtị otu ugboro ma ọ bụ ugboro ole ịchọọ engines na ntanetị n'ịntanetị?
Kpọtụrụ anyị taa
Ndepụta Akwụkwọ ndekọ aha azụmaahịa
Nyefee ndepụta weebụsaịtị na ụdị nke ịchọrọ na ngalaba nke nwere ozi, akara ngosi na onyonyo
Ntinye Weebụ na Ndekọ Anyị
Chọrọ n'okpuru website ka website Directory maka n'efu?
© 2020 Ikike niile echekwabara,Amụma Nzuzo na Usoro